सावधान ! तपाईंलाई सामान्य लाग्ने यी बानीले सार्न सक्छ कोरोना – Khabaarpati
December 21, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on सावधान ! तपाईंलाई सामान्य लाग्ने यी बानीले सार्न सक्छ कोरोना
विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेको छ । नेपालमा भाइरसको उच्च खतरासँगै त्रास पनि बढ्दो रहेको छ ।कोरोना भाइरसको महामारी रोक्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य संघसंस्थाहरूले विभिन्न सावधानी अपनाउन आह्वान गर्दै आएका छन् ।
आँखा तथा मुखको माध्यमबाट भाइरसहरू सहजै शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।एक अध्ययनका अनुसार मानिसले एक घन्टामा करिब १६ पटकभन्दा बढी आफ्नो अनुहारमा छुन्छ । कसैको त बानीनै हुन्छ कि पटक पटक नाक, आँखा तथा मुख छुने ।
यस्तै लगातार मुख धुने बानीले पनि ‘इन्फेक्सन’को शिकार भइन्छ ।सन् २००८ मा भएको एक अध्ययनका अनुसार १० जना मानिसलाई ३ घन्टाको लागि अफिसको माहोलबाट एक्लै राखिएको थियो । अनुसन्धानले ती मानिसहरूले एक घन्टामा १६ पटक आफ्नो अनुहारमा हात पुर्याएको अर्थात छोएको पाइयो ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोल,,,